Qwerty Elemental Zvikwama Ruoko - Dhizaini magazini
Zvikwama Ruoko Sezvakangoita typewriters dhizaini shanduko inoratidza shanduko kubva kune yakanyanya kuomarara fomu kuti yakachenesa-yakamonana, yakapfava jiometri fomu, Qwerty-elemental ndiko kusimba kwesimba, kufanana, uye nyore. Zvigadzirwa zvesimbi zvinovaka zvakagadzirwa nemhizha dzakasiyana siyana zvakasiyana patichagadzirwa, izvo zvinopa bhegi kutaridzika kwekugadzira. Izvo zvakakosha peculiarity yehombodo ndeye maviri typewriter makiyi ayo anozvigadzira uye anounganidzwa nemugadziri iye amene.
Zita rechirongwa : Qwerty Elemental, Vagadziri zita : Patrizia Donà, Izita remutengi : Donà.
Mafashoni uye zvekushongedza zvinhu zvekugadzira
Zvikwama Ruoko Patrizia Donà Qwerty Elemental